लक्ष्यहीन गन्तव्य | SouryaOnline
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १० गते ३:१२ मा प्रकाशित
सात दल र विद्रोही माओवादीबीच भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएपछि ठूलै काम भएको ठानिएको थियो । त्यसताका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालमा चामत्कारिक रूपमा शान्ति स्थापना हुने, दु्रत गतिमा विकास हुने, सम्पूर्ण जनअपेक्षा पूरा हुने जस्ता प्रतिबद्धता नेपाली जनतासामु जाहेर गरेका थिए । अहिले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ६ वर्ष बित्न लाग्यो । मुलुकको अवस्था दिनानुदिन झन् उकुसमुकुस र अत्यासलाग्दो बन्दै छ । कार्यमा भन्दा भाषणमा रमाउने, राष्ट्रको भन्दा आफ्नो हित सोच्ने र रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित हुने परम्परा स्थापित गरियो । यसले गर्दा हामी अन्योल, अभाव, असुरक्षा र आत्मसमर्पणको अवस्थाबाट गुजि्ररहेका छौँ । हाम्रा सामु काहालीलाग्दो कालखण्ड उपस्थित भएको छ । यसलाई चिर्दै
अगाडि बढ्न राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको नेपाली मन, नेपाली आस्था,
नेपाली विश्वास र नेपाली जाँगरको आवश्यकता छ ।
विधि, प्रक्रिया, आस्था र विश्वासलाई कुल्चिएर कोही पनि अगाडि बढ्न सक्तैन । समय बडो निर्मम हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ तर हरेश खाने र आत्तिने अवस्थ्ाा छैन । किनभने त्यो निर्मम समयलाई सहज र आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने क्षमता नेपाली जनतामा छ । ६ वर्षसम्म आफूलाई शीर्ष नेता बताउनेहरूले राष्ट्र र जनतालाई के दिए भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको उत्तर ती नेताहरूले दिन सकिरहेका छैनन् । शान्ति, सुशासन, सद्भाव, अधिकार र सहअस्तित्व समाप्त भएको छ । जताततै अशान्ति, अराजकता, बेरोजगारी असहयोग, वैरभाव, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कुशासन मौलाएको छ । जब आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा हराउँदै जान्छ तब मुलुकले पहिचान गुमाउने क्रम सुरु हुन्छ । यसतर्फ नेपाली जनता साह्रै चनाखो हुन जरुरी छ । कतै हाम्रो राष्ट्र नै गुम्ने हो कि भन्नेतर्फ ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली जनता सहनशील र धर्यवान् छन् तर अति भएपछि सहनै पर्छ भन्ने हुँदैन । नेपालका नेतालाई जनताले पत्याउने आधार गुम्दै गएको छ । शान्ति स्थापना र संविधान बन्न नसकेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने यस्तो बेलामा जनताले कुन व्यवस्था रुचाउँछन् भनेर जनमत संग्रहमा जाने हिम्मत पनि गरिएको छैन । यसरी शासन व्यवस्था कति दिन चल्छ र जनताले कति धैर्य गर्ने ? जे कुराको पनि सीमा हुन्छ तर नेपालका नेताहरूले प्रत्येक विषयलाई सीमाहीन बनाउँदै अनन्तकालसम्म तन्काउने गरेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । संविधान लेख्न तीन/चारजना नेता कस्सिएका छन् । जबकि ६ सय एकजनाको जमात संविधानसभामा छ । यदि तीन/चारजनाले नै संविधान बनाउनु थियो भने ६ सय एकजनालाई किन तलबभत्ता खुवाएर पाल्नुपर्‍यो ? के त्यो भीमकाय संविधानसभा ‘रबर स्टाम्प’ मात्र हो ? नेपाली जनताले खुलेर, छलफल गरेर, जनमत बुझेर संविधान लेख्न त्यहाँ पठाएका थिए ।
तर, सुन्नमा आयो सुनसान स्थान खोज्दै केही व्यक्ति संविधान लेख्न हात्तीवनको जंगलतिर लागे । कस्तो अनौठो ! हात्तीवनको अँध्यारोमा पनि ती तीन/चार व्यक्तिबीच सहमति हुन सकेन । पात्र उनै हुन्, अभ्यास त्यही हो, अब ३५ दिनमा कसरी संविधान बनाउँछन् । पत्याउने अवस्था छैन । यो पाँच वर्षभित्र पत्याउनै नसक्ने गरी ५० अर्ब खर्च भयो । तर उपलब्धि केही भएन । अहिले पनि संविधान लेख्न जोडतोडले वार्ता हुँदैछ भन्ने खबर सुनिँदैछ । वार्तामा तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको सोच बोकेर उपस्थित हुन्छन् र संविधान बनाउने प्रचार गर्छन् । कोही भन्दै छन् किस्ताबन्दीमा भए पनि संविधान आउँछ । वास्तवमा ठीकै होला ‘रिमोर्ट कन्ट्रोल’ले जे भन्छ संविधान त्यस्तै आउँछ । अर्कातर्फ नेताहरू भन्दै छन् पूर्ण र जनसंविधान आउँदैन । सहमतिको दस्तावेज आउँछ । अनौठा अनौठा तर्क, रुचि र सोच बोकेका नेताहरूले आफ्नो धरातलीय यथार्थ बिर्सिएका छन् । राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व बिर्सिएका छन् । नेपाली राष्ट्रपति कृतघ्न
बनेर थरीथरीका कुरा गर्दै छन् । यो सरासर बेइमानी हो ।
मुलुकको राजनीति तरल अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा समाजलाई अस्वाभाविक लाग्ने, जनतालाई अपाच्य हुने र घृणा गर्न लायक कार्यहरू केही दलका नेताबाट भएको सबैसामु छर्लंग छ । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्षौं पुग्न लाग्यो तर गर्छौं भनेको काम नेताहरूले गरेनन् । उनीहरू सत्ता संघर्षमा लिप्त भएर लागे । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र आफू कुर्सीमा विराजमान हुने खेलमै चार वर्ष बिताए । जनताका नजरमा जुन कार्य निन्दनिय र गैरजिम्मेवार ठहरियो नेताहरूले त्यसलाई आफ्ना दैनिकीमा रूपान्तरण गरे । यो मित्थ्या आरोप होइन । चार वर्ष लामो समयसम्म नेताहरूले जे गरे त्यसको वस्तुपरक मूल्यांकन हो । अहिले भर्खरै आएर शान्तिप्रक्रिया टुंगियो भनिँदै छ । साँच्चै टुंगिएको हो भने त्यो राम्रो पक्ष हो । यदि ‘एकातिर टाल्यो, अर्कातिर भ्वाङ’को अवस्थ्ाा छ भने त्यस्तो टुंग्याइको अर्थ र औचित्य रहँदैन । नेपाली जनताले दुःख भोगिसकेका छन् । थुप्रै भाषण सुनिसकेका छन्, नीतिगत तर्क र आश्वासन पनि जनताले सुने र पाए तर कार्यान्वयन भएन । भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर देखियो । ६ महिनामा टुंग्याउने भनिएको शान्तिप्रक्रिया चार वर्षपछि टुंगियो भनिँदै छ । त्यसको पनि विश्वासिलो आधार देखिँदैन ।
दुई वर्षमा सक्ने भनिएको संविधान लेखन कार्य हात्तीवनको अँध्यारो गुफामा विचरण गर्दै छ । पत्याउन नसिकिने र अनौठा अभिव्यक्ति दिएर नेताहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै छन् । केही समयअघि छिमेकी मुलुक भारतका एसडी मुनी नाम गरेका प्राध्यापक आएर संविधान आउँछ, राजसंस्था र्फकंदैन र जसरी पनि सबै कुरा मिलाउनुपर्छ भनेर गएछन् । उनी ज्योतिष होइनन् । आउँछ आउँदैन, र्फकन्छ र्फकंदैन र हुन्छ हुँदैन उनले भन्ने कुरा होइन । नेपाली जनताले गर्ने निर्णय हो । नेपालकै नेताको रवैया बुझेर उनले बोलेका होलान् । सबै जनता रिमोर्ट कन्ट्रोलबाट चल्दैनन् । यो कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । अहिले हाम्रा नेता लक्ष्यहीन गन्तव्यमा छन् । जहाँबाट बर्बादितर्फ पुगिन्छ त्यहाँ पुग्ने लक्ष्य राख्नु हुँदैन । यही लक्ष्यहीनतालाई ठम्याएका विदेशीले रिमोर्ट कन्ट्रोल चलाइरहेका छन् । जुन रिमोर्ट कन्ट्रोलका कारण कठपुतली बनेर नेपालका नेता चलायमान भएका छन् । यस्ता विसंगति बेथितिहरू रोकिनु पर्छ । राष्ट्र र जनताको चाहना बुझेर गरेको काम मात्र टिकाउ, दिगो र भरपर्दो हुन्छ । यही नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
-लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
मरे बापत पनि राज्यलाई पैसा बुझाउनुपर्ने देश
१३ असार, २०७९
स्थानीय निर्वाचनको परिणामले राजनीतिमा नयाँ तरंग
कृषिबाट युवा पलायन लज्जास्पद
१२ असार, २०७९
जनताको अपेक्षा : नयाँ पार्टी कि आर्थिक विकास ?
देउवाकालमा मुलुकमा किन हुन्छन् अप्रिय घटना ?
११ असार, २०७९
सत्तामा बस्नेलाई ईश्वर ठान्ने भ्रम कहिले सकिएला ?
कैदीबन्दीको नामावली संकलन गर्न सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश
पाँच वर्षसम्म पनि चार किमी सडक नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको तयारी
जबजको मार्गमा समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको संकल्प पूरा हुन्छ : पोखरेल
कर्मचारीलाई कुटपिट गर्दै कार लुटेर भाग्ने तीन भारतीय पक्राउ
पार्टी दर्ता नहुँदै रवि लामिछानेको आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न
न जनतालाई राहत, न विकल्पको खोजी
केही नबोली पार्टी कार्यालय छिरिन् रामकुमारी
‘कम्युनिस्ट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ’
पानीपोखरी, काठमाडौं ।
© 2022 Souryaonline.com All rights reserved